Blog မှာ Content Warning ကို Remove လုပ်နည်း ~ Myanmar Blogger Guide
Posted by ဘလော့ခရီးသည် - 1 comment | labels- Blog Tutorial, Blogger Beginner
Blogspot တစ်ခုတစ်လေကို ၀င်ကြည့်လိုက်ရင် Content Warning ဆိုပြီ တက်လာတာကို တွေ့မိကြမှာပါ။ I understand and wish to continue ကိုနိုပ်မှ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ blog ကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီ Content Warning ပေါ်တာကတော့ ကြည့်ရှုသူကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဖြစ်မှ ကြည့်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ထဲက Adult Content? မှာ Yes ပေးထားလို့ပါ။ ကြည့်လိုက်ပါ။
1. မိမိ blog ကို Sign In လုပ်လိုက်ပါ။
3. Basic မှာ Adult Content? ကို ရှာလိုက်ပါ။ Yes ပေးထားလျင် Content Warning က မိမိ blog စဖွင့်ဖွင့်ချင် အရင်တက်လာပါမည်။ No ပေးထားရင် မိမိ Blog ကို ချက်ချင်း ရောက်ပါမည်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က Content Warning မတက်စေချင်တာဖြစ်တာကြောင့် No ပေးလိုက်ပါ။
4.Save Changes ကို click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိ Blog ကို Content Warning တက်မလာတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ)ဆီကရတာပါ...ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ဖူးတော့ ဒီပို့စ်ကို သွားတွေ့တာ... ဘလော့ဂါ အသစ်စက်စက်များတွေ့ရတတ်ပါတယ်....
cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်...
sahed ullah 1 January 2016 at 22:57
now you can easily removed ATOM link , HOME link and POWRED by link from
remove from blog .